Maxaa kala heysto waalidka iyo mucaashaqiinta ( qis dhab ah oo | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
Maxaa kala heysto waalidka iyo mucaashaqiinta ( qis dhab ah oo
Dhacdadaan ayaa waxay ka dhacday degmada Kaaraan ee magaaladda Muqdisho, waxayna u dhaxeysay lamaane Somaliyadeed kadib markii la’isku diiday, iyadoo dad badani ay ka yaabisay. Labadaan Lamaane ayaa waxa lagu kala magacaa Anwar iyo Salma. Waxayna ku bilaabaneysaa sidatan:-
Waxaan ku dhashay deegaanka Ruunirgood ee gobolka Shabeeladda dhexe sanadkii 1985-kii. Waxaan kusoo barbaaray magaaladda Muqdisho, waxbarashadeyda waxaan kusoo qaatay iskuulka Mucaad Ibnu Jabal oo ku yiilay degmada Kaaraan.
Intii aan waxbarashada ku guda jiray, waxaa isfahan iyo kaftan wanaagsan igana dhaxeeyey Salma. Salma waxay aheyd gabar uu dhalay adeerkey, Aniga salma waxaa isla soo qaadanay waqti dheer, xilligaas muusan naga dhaxeenin wax jaceyl ah, balse labadeenuba waxaan aheyn dad isgaad-gaad uun ka dhaxeeyo.
Waxaan ladhacay sheekadayda, waxan la-dhacay wanaagaydii faraha badnaa ay aniga i heysay. Xaqiiqdii Salma waxay hanatay qalbigayga oo dhan, taasoo ay ugu wacan tahay wanaagayda faraha badan.
Mudo kadib Salma waxan u soo bandhigay caashaqii aan u qabay, hadal iyo xishood iyo waan kasoo fikiri doonaa intaba maysan igu dhihin oo waa ay i soo dhaweysay.
Waxaan isla qaadanay jaceyl wanaagsan, sheeko macaan, Wax-yaabaha ay igu hanatay wuxuu kamid ahaa, waxay aheyd gabar aanan ka caajisaynin, waxay aheyd gabar sida shaah oo kale i qaban jirtay, waxay aheyd gabar aan waayey qof aan u dhigo.
Jaceylkii inaga dhaxeeyey waxaa ka war helay waalidiinta Salma, oo ahaa kuwo uun ka danbeeyey ama daneeya Lacag. Salma waxaa ladhashay caruur fara-badan, kuwaasoo ku kala nool qaaradaha, Amerika, Yurub iyo Australia. Sidoo kale Salma waalidiintayda waxay ahaayeen kuwo lacag fiican ku fadhiya, waxay aad uga caroodeen la-socodkii ay ila socotay.
Salma waalidiintii dhalay waxay noqdeen kuwo hadalo xun xun had iyo jeer ku dhihi jiray, iyagoo sheeg sheegi jiray ama igu tilmaami jiray inaan ahay ruux faqiir ah oo aan waxba haysan. Oraah walbo oo ay salma waalidiintayda ku dhahaan waxay aheyd mida mar walba i soo gaarsiin jirtay.
Waalidiintii dhalay Salma ayaa waxay ku sasabeen in’ay faraha iga qaado, haddii ay taasi yeeshana loo-diro doono wadamada reer galbeedk. Balse Salma maysan aheyn qof waxaasoo dhan u muuqda, waxa kaliya ee u muuqda waa galkacaylka ay i qabto.
Waan yaa-banahay waxaan isleeyahay maxaa adeerkaa iyo eedadaa kuugu diray, sababtu maba garaneyn. Xaalka marka aanu bixin weynay ayaa tashanay. Waxaana go’aan buuxda ku gaarnay inaan is-mahersano weliba si-hoose, ileen waxaanu nahay dad isjacel lana isku diidaayo.
Sidii ayaa yeelnay, waanu isa soo mahersanay, maherka kadib waxaan ku heshiinay inaanan sheegin wax walbo oo ay nagu qaadato. Waxaan isqabnay 5 bilood, tuhunkii nalaga qabay ayaa batay, oo wuxuu noqday mid cirka isu shareeray. Salma ayaa waalidiintayda u yeeray, waxay ku dhaheen ninkaan haddii uu ku qabo sheeg, hase yeeshee Salma maysan sheegin, oo balanteenu waxay aheyd inaan isqarsano, bacdamaa ay iskukeen rabin waalidkii dhalay Salma.
Odayga dhalay Salma ayaa wuxuu ahaa mid yaqaano lacag uun balse aanan laheyn wanaag iyo tolnimo. Weydhici kartaa in dadka qaar la’isku diido, weliba qaab qabiil, balse aniga maxaa leegu diiday, waxaan ahay wiilkooda, waxan ahay nin ay isku meel kasoo wada jeedaa, waxan ahay nin ay isku dhiig yihiin.
25 cesho kadib waxan ka war helay in Salma lagu xiray Xabsiga Afar Irdood ee degmada Xamar Weyne. welibana laga Xiiray Timaha oo dhan. Anigoo iska careysan talo oo dhan ay igu xun tahay ayaa u sheegay adeeradey oo dhan. Balse maanan u sheegin inaan isqabno.
Waxaa dhacday in’ay adeerey u tagaan odayga balse odaygu maaha nin wiji iyo tol yaqaana, waa nin yaqaano uun lacag. Adeeradey ayaa igu dhahay sheeg haddii aad qabto si’aan gabadha kaaga soo ka xayno, haddii aadan qabani ka sabar gabadhaasi.Waxaan u arkay in’ay tahay xal wanaagsan,welibana waxan u qaatay mid aan ku hanan karo jaceylkayga.
Waxana u sheegay adeeradey inaan qabo Salma, una baahanahay maadaama ay tahay xaaskayga. Adeeradey ayaa igu yiri ninkaan laga yaabo inuu kuugu inkiro gabadha ee keenso warqad cadeyneysa in’ay xaaskaaga tahay. Waxan u tagay Sheekhii i sameeyey warqadii maherka.
Aniga iyo adeeradey ayaa u tagnay odayga Salma dhalay balse waxa uu noogu jawaabay tani waa Copy ee keena warqadii Asalka aheyd (The Original One). Sidii ayaa yeelay midi asalka aheyd inuu i sameeyo ayaa ka codsaday Sheekhii maherka i sameeyey.
Xilligaas waxaa magaaladda muqdisho si deg deg ah kusoo gaartay Salma hooyadeed oo markii hore-ba ku maqneyd magaaladda Nairobi halkaasoo u uga socday dacwad ay ku tagi laheyd dalka Ingiriiska. Waxay tagtay Xabsiga Afar Irdood ee degmada Xamar weyne, waxayna kasoo sii deysay gabadhii ay dhashay oo xabsiga ku jirtay ku dhawaad 3 bilood. Durbadiiba Salma hooyadeed iyadana dhankayda ayay dagaalka kasoo gashay, iyadoo odaygeeda ku taageertay inaanan guursan karayn gabadhooda.
Waxaan Adeerkey iyo Salma odayga dhalay u keenay warqadii Original-ka aheyd ee cadeyneysay maherkayna, si kastaba ha’ahaatee waxay jawaab iga dhigay, gabar kale ayaad soo mehriseen oo magaca Salma ayaad kasoo dhigteen.
Adeeradey waa ay yaabeen, afkii ayaa kala tagay, talo oo dhan ayaa nagu wada xumatay.
Salma hooyadeed ayaa waxay tiri ninkaan gabadhayna maba qabi karo, iyadoo gabadhayda ku tiri sheeg ninkaan faqiirka ah sidee buu-kuugu qabi karaa. Salma waxay iska aheyd qof ay da’deedu hooseeso. Iyadoo mar kale ka cabsatay in madaxa laga xiiro xabsina Af loo-galsho Mar kale,waxaa igu furmay walaac aanan qiyaasi karin, anigoo naxsan goob-joog ahna ayaa waxay Salma tiri Anwar ima-qabo balse jaceyl baa-naga dhaxeeyo. intaasi markaan maqlay waxan ku dhawaaday inaan waasho.
Hada waxaan ku suganahay xaalad adag iyo dhibaato tii ugu darneyd. Waxan sameeyo garan maayo, dabcan qof walba waa uu dareemi karaa arintaan oo kale xanuunka ay leedahay.
Anwar oo ka sheekeynaayey dhacdadii xanuunka badneyd ee qabsatay ayaa intaasi kusoo gaba-gabeeyey. Wuxuuna donaayaa in’ay talo soo siiyaan dhalinta Somaliyadeed ama kuwo caashaqa wax ka yaqaana, hadaba qof walba wixii fikirkiisa ah wuxuu kusoo diri karaa
anagana waxaa gaarsiin doonaa Anwar.
www.nololcusub.tk waa hoyga dhalinyarada
Qiso Layaab Leh oo ka dhacday Wadanka Finland, iyadoo ay u dhaxeysay Lamaane Soomaaliyadeed. (Sababtu Maxay Tahay). Qisadii Abuubakar & Xabiiba.